सम्भाव्यता बारा–पर्सामा, योजना अन्तै! - Malayakhabar
होम पेज अर्थ / कर्पोरेट सम्भाव्यता बारा–पर्सामा, योजना अन्तै!
सम्भाव्यता बारा–पर्सामा, योजना अन्तै!
बारा र पर्सा जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति उद्योगका लागि उपयुक्त भए पनि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको योजना अन्यत्र पारेकोप्रति यहाँका उद्यमीको असन्तुष्टि छ । संघले संघ र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेरै बारा–पर्सामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग गरेको अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
अघिल्लो लेख भारतको उत्तराखण्डमा हिम ताल फुट्दा आठकोे मृत्यु, कैयौँ घाइते।
पछिल्लो लेख अमेरिकामा बसिरहेकी महिलालाई किम जोंग उनले मारिदिने त्रास!